October 7, 2020 - Amawpyay
မိမိရဲ့ ဦးတည်ချက် ရည်ရွယ်ချက်ကို ဝေဖန်မှုတွေကြောင့် အပျောက်ဆုံးမခံပါနဲ့
မိမိရဲ့ ဦးတည်ချက် ရည်ရွယ်ချက်ကို ဝေဖန်မှုတွေကြောင့် အပျောက်ဆုံးမခံပါနဲ့ တစ်ခါတုန်းက အင်မတန်တော်တဲ့ စက်မှုလက်မှု ကျွမ်းကျင် တဲ့သူ တစ်ယောက် ရှိတယ်။ တစ်နေ့တော့ သူက လူတွေပြောစ မှတ်ဖြစ် လောက် မယ့် သူ့ကိုအားလုံး ဝိုင်းပြီး ချီးကျူးမယ့် အလုပ် တစ်ခုကို လုပ်ပြချင် စိတ်ဖြစ် လာတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ သူက ကြိုးကြာ ဌက်ရုပ်တစ်ခုကို ဆောက်ပါလေရော။ ပထမဆုံး သူက ကောင်းမွန်တဲ့ သစ်သားအကြမ်းကိုရှာပြီး ကြိုးကြာ ရုပ်တစ်ခု ထုလုပ်ရတာပေါ့။ ပုံကြမ်းလေးပေါ် လာတယ် ဆိုရင်ပဲ သူ့အိမ်ရှေ့က ဖြတ်သွားကြတဲ့ လူတွေကဝင်ဝင်လာကြည့်ပြီး အမျိုးမျိုး ကဲ့ရဲ့ သတဲ့။ ပန်းပုဆရာတွေ ကလည်း …
မိသားစုနှင့် အရင်းနှီးဆုံးလူတွေနဲ့တောင် အတူမျှဝေမသုံးစွဲသင့်တဲ့ ပစ္စည်း (၅ )မျိုး
မိသားစုနှင့် အရင်းနှီးဆုံးလူတွေနဲ့တောင် အတူမျှဝေမသုံးစွဲသင့်တဲ့ ပစ္စည်း (၅ )မျိုး ဘယ်လောက်ပဲ ရင်းနှီ ပါစေ အတူတူသုံးလို့ မဖြစ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ရှိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းဆီက ခဏငှားသုံး တာဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုထဲက တစ်ယောက်ယောက် ကိုငှားတာပဲဖြစ်ဖြစ် မလုပ်သင့် ပါဘူး။ အတူတူ သုံးစွဲလို့ မရတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ကဘာတွေလဲ ကြည့်လိုက် ရအောင် ။ ၁။Lip Gloss နဲ့ Lipstick နှုတ်ခမ်းနီ တစ်ချောင်းတည်း ကိုအတူတူ သုံးလို့ မရပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုရင် တစ်ယောက်က ဆိုးပြီးတဲ့ အခါမှာ နှုတ်ခမ်းနီမှာ တံတွေး၊ သားရည် စသဖြင့် တစ်ခုခု ကပ်ကျန် နိုင်ပါတယ်။ …
အိမ်ထောင်ရေး သာယာဖို့ ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အရာများ
အိမ်ထောင်ရေး သာယာဖို့ ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အရာများ ၁။ လူရှေ့သူရှေ့ မရှောင် အိမ်ထောက်ဘက်ကို အပြစ်တင်ခြင်း လင်နဲ့မယား လျှာနဲ့သွားပါ။ အိမ်ထောင်သက် ရလာတာနဲ့ အမျှ အထစ်အငှော့လေးတော့ ရှိတတ်ကြ ပါတယ်။ လူရှေ့သူရှေ့ မရှောင် တဘက်သားကို အပြစ်တင် ရန်ထောင် ရင်တော့ ရန်ပွဲ ဖြစ်လာ မှာပါ။ အဲလို ရန်ဖြစ်တာ ပြဿနာကို ပြေလည်အောင် မဖြေရှင်း နိုင်တဲ့ အပြင်မီးလျှံ ထဲကို ဓါတ်ဆီ လောင်းလိုက် သလို ဖြစ်သွား တတ်ပါ တယ်။ နောက်ဆုံး ကျရင် ဘယ်သူမှ အလျှော့ ပေးလို့ မရတဲ့ အနေအထား ရောက်သွားတတ်ပြီး ပွဲသိမ်းဖို့ ခက်ခဲ …
လူဖြစ်ရှုံးတဲ့ လူအမျိုးအစားများ (ဘယ်တော့မှ စိတ်အေးချမ်းသာ နေရမှာမဟုတ်သူများ )
လူဖြစ်ရှုံးတဲ့ လူအမျိုးအစားများ (ဘယ်တော့မှ စိတ်အေးချမ်းသာ နေရမှာမဟုတ်သူများ ) လူအဖြစ်မွေးဖွား အသက်ရှင် လာခဲ့ပေမယ့် စိတ်ထား မမှန်မကန် ရပ်တည်အသက်ရှင် ပြောဆိုနေထိုင် တာကြောင့် လူဖြစ်ရှုံးကြ သူများ အမှန်တကယ် ရှိပါတယ် ။ မိမိ အတွက်သာမက လူ့ပတ်ဝန်ကျင် အတွက်ပါ အမှိုက်ဖြစ်နေ တတ်သူတွေ ပါ။ ဘယ်လို လူတွေက လူဖြစ်ရှုံးလဲ ဘယ်လောက် ပူလောင် သူများလဲ ဆိုတာ ကြည့်လိုက် ရအောင် ။ ” လူဖြစ်ရှုံးကြသူများ ” ( ၁ ) လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းကို ကွယ်ရာမှာ အုပ်စုလိုက် အတင်းတုပ်ပြီး အပုပ်ချ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာ …
ဘယ်အစိုးရတက်တက် ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရမှာလို့ ပြောသူတွေ ဖတ်ဖို့ ရေးတဲ့စာ
ဘယ်အစိုးရတက်တက် ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်စားရမှာလို့ ပြောသူတွေ ဖတ်ဖို့ ရေးတဲ့စာ ဘယ်သူတက်တက် ကို.အလုပ်မဟုတ်ဘူး ၊ ဘယ်အစိုးရ တက်တက် ကို.ထမင်းကို ရှာစားရတာဆိုတဲ့ သူမျိုးတွေ တပုံကြီးပဲ၊ ကို.ထမင်းကို ကတော့ လူမပြောနဲ. တိရစ္တာန်တွေလဲ သူ.အစာ သူရှာစား ရတာပါပဲ၊နွားတကောင် အဖို.ကတော့ ဘယ်အစိုးရ တက်တက် သိပ်မထူးပါဘူး သူဟာသူ မြက်ပဲစား ရမှာ ဒေါ်စု တက်လဲ ဘာအရေးလဲ မြက်က လွဲရင် ထောပတ်ထမင်းတို. ဒံပေါက်တို.စားရမှာ မဟုတ်တာ၊ဘာလို.လဲ ဆိုတော့ နွားဖြစ်နေ တာကိုး၊ ဦးသိန်စိန် တက်လဲ မထူးဘူးလေ သူက နွားကိုး နွားဆိုတော့ မြက်ပဲ စားရမှာ ကိုးအဲ ဆန်းတာကတော့ …